I-Dandruff ... Abantu abanenhlanhla abazange bajongane nale nto engathandekiyo. Ukuqhubekayo, ukutyhawula, ukuqhaqhazela, ukucaphukisa, ukukhankanywa, kungabi khankanya ukuba ezi zilinganiso ezincinci ziphazamisa ukubonakala kweenwele, zibanika ukubonakala okungekho nto. Ukongezelela kukho konke oku, i-dandruff ibangela ubuthathaka kwiingcambu zeenwele, ukunciphisa ukufikelela kwe-oksijini kubo. Oku kunqanda iinwele zempilo, kwaye ngenxa yoko, ukukhanya kwemvelo namandla. Ngamaqhinga, ngenxa yesizathu esithile, abaninzi abantu abaqapheli ukuba i-dandruff ayiyona inkathazo eyinkathazo, kodwa ukulungiswa, okuyimfuneko kwaye kubalulekile ukunyanga ngokukhawuleza. "Indlela yokurhoxisa i-dandruff, izigulane zabantu" - umxholo wendaba yethu yanamhlanje.
Akwanele ukuba uhlambe ngaphandle kwesikali sesikhumba. Sidinga ukuqonda oko kubangele ukubonakala kwabo nokuphelisa izinto ezibangele isifo. Izizathu zingabini zangaphandle nangaphakathi.
Sibhekisela ngaphandle :
i-shampoo ekhethiweyo, i-balm kunye nepeyinti engafanelekanga, ukuba udayayo iinwele zakho, kunjalo;
amanzi anamanzi - kwaye ezininzi kwiindawo zokuhlala zihlala zinzima;
Kakade, umntu akayi kukulibala ngempembelelo yokukhupha i-gesi kunye nemeko efana neyosingqongileyo esicacisekile nakakhulu.
Kwiqela lesibini, izinto zangaphakathi , sichaza ngokungathandabuzekiyo:
Ukungalingani kwe-hormonal jikelele yomzimba wakho;
izidanga zendalo ezahlukeneyo;
Njengoko uqonda, unyango kufuneka lubekwe ngokuhambelana nemiba. Kwaye ukuba izizathu zangaphakathi zinetyala, ngoko ke into echanekileyo kukuzisa umzimba wakho. Ukulungelelanisa ibhalansi ye-hormonal ( qhagamshelana nogqirha - wezilwanyana ). Qala ukubeka esweni ukutya, udle izityalo kunye nemifuno eninzi, njengeebhanana, imihla, utamatisi, iklabishi, i-carrots, i-avocados. Ukutya iintlanzi, ivenkile zasemanzini, i-walnuts, i-peanuts, ushizi. Ngokuqinisekileyo kuyimfuneko ukunciphisa ukutywala kotywala, ukutya okunomsoco, okucocekileyo kunye nokutya. Akuyi kuba yinto engafanelekanga kwimpilo yakho yonke ukuba isebenzise rhoqo ii-multivitamines. Iingcali zincoma nokuba nidle imvubelo yezokwelapha. Zonke ezi mveliso ziya kuzalisa umzimba wakho ngamavithamini B kunye nePP, kunye ne-zinc. Ezi zinto ziza kunciphisa ukutshiza, ukukhulula isikhumba sakho ekumanyeni kwaye uncede unyange i-dandruff.
Ukuba imbangela ingaphakathi kwimiba yangaphandle, ngoko ke kunokwenzeka ukuba ukunciphisa imiphumo yabo engozi kwizinwele zakho ne-scalp.
Amanzi anamanzi anokunciphisa ngokunyusa isitya seviniga kuso. Ungakwazi ukuthenga i-distiller kwaye uhlambe intloko yakho ngamanzi ane-distilled. Kwakhona kubaluleke kakhulu ukushisa kwamanzi asetyenziswayo. Ngokuba isalathisi sinceda "ukuhlamba" ukuhlamba, oko kukuthi, ukulula okulula kwamanzi afudumele kunye namanzi afudumeleyo. Oku kuya kunika umphumo onzima wokusebenza. Kodwa ungaze uvule amanzi ashushu kakhulu, oku kunemiphumo emibi kakhulu kwimeko yengcambu yeenwele.
Musa udaye iinwele zakho rhoqo. Kuya kuba kuhle ukushiya umbala weekhemikhali weenwele. Kodwa ukuba kukho umnqweno okanye isidingo sokusebenzisa ipeyin, khumbula idayi zendalo. Le henna, basma, i-onion husk, igobolondo le-walnut. Ziyizona zikhundla eziphezulu zekhemistri kwaye ziya kuzuza kuphela iinwele zakho.
Ukusuka kwi-shampoos kunye nezinye iindlela ezisetyenziselwa ukunakekelwa kweenwele, ezithambileyo, i-hypoallergenic ze-shampoos zebantwana kunye ne-balms - i-rinses ifanelekile.
Akuyi kuba ngumbono ukuphawula ukuba unyango luxhomekeke kulolu hlobo .
I-dryruff eyomileyo iyenzeka xa ulusu lumile. Kulula ukuhlanjululwa, iinwele zomile, zinyuka, njengokungathi zigqutywe ngeeqhwa zeqhwa. I-oily dandruff ibonakala kwi-scalp eyingozi kakhulu. Kuyinto engathandekiyo - iziqhephu ezinqathayo zeengqayi zihlala ngokukhawuleza emva kokuba uzihlambele emva kokuba uhlambe iinwele zakho. Qonda ukuba uluphi uhlobo lwe-dandruff lubaluleke kakhulu, kuba oko kunceda ekulwa nokulwa neenqatha akusihlali kusinceda ekulwa nomlobo oomileyo kunye nakwezinye izinto.
Kukho inani elibizayo, iindlela ezikhethekileyo zokulwa nokukhwabanisa. Asinakuphikisa malunga nokucebisa kwesicelo sabo, oku kukhethwa kuya kuhlala kusekho. Ndifuna nje ukukukhumbuza ukuba kunye neyeza zendabuko, akufanele ulibale malunga nabantu, iindlela zokupheka ezibonisiweyo zokulwa nokukhwabanisa. Zilula ukuyisebenzisa kwaye musa ukubetha isikhwama esikhulu, esibaluleke ngokukodwa kwiimeko zezoqoqosho zangoku.
Ngokufanelekileyo iphelisa zonke iintlobo ze- tincture ye-calendula , ekufuneka ixutywe kwi-scalp ngaphambi kokuhlamba. Kwakhona luhle kakhulu kunyango lwaluphi uhlobo lokusetyenziswa kweoli ye-castor. Uxubha ngendlela efanayo ne-calendula. Iingcali zicebisa kakhulu iresiphi, ebonakaliswe ngamachiza aseMpuma - ii-oyile eziyimfuneko. Ukusuka kwi-dandruff uza kunceda iioli ze-lemon, i-cypress, umthi weti, i-lemon balm, ylang-ylang. Ukongeza ngaphezu kweenwele eziluhlaza kuya kufumana iphunga elikhulu. Unokutshiza ngenyameko, unokufaka isicelo kwikhefu uze uyiqhube ngeenwele zakho, uze uchithe amanqabana amaninzi eoli efunekayo emanzini uze uhlambulule iinwele zakho emva kokuhlamba. Qaphela kuphela, funda phambili, nokuba unesiphumo esiphumelelayo kule mafutha engokwemvelo.
Kuya kunceda nge-dandruff eyomileyo ngemitha yeengqayi ezimbini zeeqanda ezinejisi lemon enesiqingatha semon. Kwakhona, kufuneka udonse amaconsi ambalwa e-burdock okanye ioli ye-castor. Gubha kwi-scalp.
Umxube uncedo kakhulu weetyuwa ezine zeoli yeoliva kunye namanzi kunye nejusi yesiqingatha semononi ishushu kwi-ibhedi yamanzi. Ukwahlula iinwele ngenxalenye yecandelo. Gubungela umxube ofudumeleyo ngobumnene, ngezandla zakho, kwi-scalp ngaphambi kokuba uhlambe.
Ngomnxeba ococekileyo, kucetyiswa ukuba uhlanjule iinwele emva kokuhlamba kunye ne-onion peel kwisilinganiso sama-50 g nge-1 ilitha yamanzi abilayo, ufune isigxina seyure.
Thabatha ingqalelo! Ukuxutywa kwama-ani husks kushintsha umbala weenwele! I-Blonde ayikhuthazwa ukuyisebenzisa!
Ngeenwele ezikhanyayo, kulungele ukusebenzisa i-chamomile iintyatyambo ngesantya seepunileji ezimbini kwiitre zamanzi abilayo. Nciphisa ukukhushulwa komntu omnye ukuya kweshumi, uhlambe emva kokuhlamba iinwele kwi-scalp. Unika i-golden hue.
Ezinye iingcali zincoma ukuxubha ngeenqatha ezinamafutha emva kweeyure ezintathu ngaphambi kokuhlamba intloko ngeoli e-sulfur-salicylic e-five pesenti. Kwakhona iresiphi enhle kakhulu. Ekugqibeleni ndifuna ukuthetha. Akunandaba ukuba uza kusebenzisa ntoni ukuphatha ukukhwabanisa, kubalulekile ukuba ungasebenzi ngaluphi na uhlobo lwesifo se-scalp.
Iimaski kunye neentlobo zeenwele ezivela kwi-nettle
Unyango kunye nokubola kweenwele nge-henna kunye ne-basma
IiVithamini ezinxamnye nentlungu
Ukunyamekelwa kwebusika abangenaluvayo
I-Pantene Pro-V ivuselela ngamandla
Indlela yokuyeka ukulahleka kweenwele: amacebiso amathathu asebenzayo
Icoleta iyakhupha ekhaya
Unyango ngokweendlela zikaDudrin
UMninimzi uChor Chaliapin wembula imfihlelo eyintloko kaAna Kalashnikova
Yoga ngesisu esisisigxina
Kutheni bethanda abanye baze batshata nabanye?
I-cocktail ekhatywayo kunye ne-blackberry
Iikharathi kwi-oven microwave
Iibhunga lamachiza omdabu ekugula okuhambayo ekuthuthweni komntwana
Iintlobo zeekroti ezithandekayo kunye nempilo